Dib -u -eegista Oranum | Akhrinta maskaxda ee internetka
Akhrinta maskaxda internetka > Dib-u-eegista Oranum
Dib u eegis Oranum buuxa
Oranum ayaa dhawaan bilaabay inay bixiso akhriska maskaxda ee Mareykanka, si kastaba ha noqotee waxay ku bixinayeen akhrinta dalkooda hooyo ee Poland sanado badan. Oranum waa mid u gaar ah inay bixiyaan oo keliya akhriska ku saleysan websaydhka. Sidoo kale loo yaqaan "video chat." Xitaa haddii aadan haysan kaamirada websaydhka wali waad heli kartaa aqrin, waad weydiin kartaa su'aalahaaga adoo ku qoraya sanduuqa wadahadalka, laakiin haddii aad leedahay webcam iyo makarafoon waxaad si toos ah ula hadli kartaa akhristahaaga maskaxda ee wax u dheereeya , oo waxaan u maleeyay inay tahay tikniyoolajiyad quruxsan. Dhowr cilmi-nafsi oo aan la hadlay waxay ahaayeen kuwo sax ah oo talo fiican i siiyay.
Waxay leeyihiin hannaan baaris hufan oo loogu talagalay cilmu-nafsiga, in kasta oo aysan weli sidii hore u fiicnayn Ilaha Maskaxda or Weydii. Waan yara xumaaday inaysan haysan taageero macaamiil taleefan ah. Tani waa inay noqotaa shuruud ganacsi kasta. Waxaan ka helay e-maylkooda taageerada macaamiishooda in lagu soo jawaabo wax ka yar saacad laakiin ma jiraan wax la mid ah inaan la hadli karo qof nool si dhibaatooyinkaaga si dhakhso leh loogu xalliyo. Guud ahaan Oranum waxay leedahay teknolojiyad qabow, nidaam baaris maskaxeed oo wanaagsan laakiin adeegooda macaamiisha ayaa ka maqan waqti weyn.
Oranum wuxuu ka bilaabay dalkoodii hooyo ee Poland. 2010 waxay go'aansadeen inay ku fidaan Mareykanka. Waxay si rasmi ah albaabada ugu fureen macaamiisha Mareykanka bishii Abriil 2011. Iyagu waa kuwii ugu horreeyay, oo adeegga kaliya ee maskaxda ku saleysan ayaa laga heli karaa meel kasta.
Nidaamka baaritaanka maskaxda ee Oranum waa mid aad u wanaagsan. Waxay leeyihiin wax badan oo maskaxiyan ah oo tayo leh, laakiin uma fiicna sida qaar ka mid ah adeegyada kale ee maskaxda. Cilmu-nafsiga waxay maraan nidaam tijaabo adag kahor intaanay wax ku aqrin karin Oranum, laakiin ma aanan dareemin inay aad u adag tahay ama gaar tahay. Waxaad ubaahantahay inaad ka taxaddarto cilmi nafsiga aad kula hadlayso Oranum.
Runtii waan jeclahay websaydhka Oranum. Way fududahay in la maro waxaadna raadsan kartaa oo aad kala sooci kartaa Maskaxiyan si fudud. Awood u lahaanshaha inaad ka daawato fiidiyow maskaxiyan kahor intaadan helin aqrintu waa mid cabsi badan waxayna kuu ogolaaneysaa inaad runti dareento maskax intaadan go'aansan inaad laxariirto. Waad daawan kartaa jadwalka Maskaxda iyo xitaa naftaada jadwal u aqri akhris jadwal kasta oo cilmi nafsi ah.
Oranum wax qiimo dhimis ah uma siiso macaamiisha cusub, laakiin waxay leeyihiin qaab gaar ah oo ay kuugu oggolaadaan inaad isku daydo adeegyadooda. Iyada oo loo marayo barnaamijyadooda wada sheekaysiga fiidiyowga waxaad kula sheekaysan kartaa wixii maskaxeed ee khadka tooska ah, bilaash illaa intaad rabto. Haddii aad go'aansato inaad jeceshahay maskaxdaas markaa waad bixin kartaa inaad aqriso iyaga. Waxaan u maleynayay inay tani ahayd mid aad u wanaagsan oo kuu oggolaaneysa inaad hesho dareen dhab ah oo ku saabsan maskaxda aad bixinaysid, ka hor intaadan bixin. In kasta oo aysan jirin qiimo-dhimis haddana waxaan dareemayaa inay tani qiimo ku filan tahay oo aanad u baahnayn sicir-dhimis.
La'aanta taleefoon la'aanta ayaa runtii i dhibaysa. Waxaan rumaysanahay in ganacsi kastaa inuu lahaado lambar adeeg macaamiil taleefan oo wanaagsan. Oranum waxay bixisaa iimaylka taageerada macaamiisha, waxayna ku jawaabeen si dhakhso ah laakiin kaliya maahan inay awood u leedahay inay taleefanka ka qaadato oo ay la hadasho qof dhab ah. Haddii Oranum ay u adeegsadeen tikniyoolajiyadooda webcam adeegga macaamiisha runtii waan faraxsanaan lahaa.